पोर्तुगाली फुटबलर रोबेन सेमेडो बलात्कारको आरोपमा ग्रीसमा पक्राउ ! - VOICE OF NEPAL TV
पोर्तुगाली फुटबलर रोबेन सेमेडो बलात्कारको आरोपमा ग्रीसमा पक्राउ !
१६ भाद्र २०७८, बुधबार २०:०५
पोर्तुगाली फुटबलर रोबेन सेमेडो एक १७ वर्षीया किशोरी बलात्कार गरेको आरोपमा ग्रीसमा पक्राउ परेका छन्।
केटीको उमेरका कारण सेमेडोलाई ‘नाबालिगको बलात्कार’ को आरोप लाग्ने खतरा छ।
ग्रीक क्लब ओलिम्पियाकोससँग अनुबन्धित रहेका २७ बर्षीय पोर्तुगाली फुटबलर हिजो राती पक्राउ परे।
स्थानीय समाचारका अनुसार किशोरीले आफ्नी आमाको सहयोगमा फुटबलर रोबेन बिरुद्ध बलात्कारको उजुरी गरेकी हुन् ।
प्रहरीलाई दिएको उजुरीमा ति किशोरीले , “ओरोपोसको एक बारमा पेय पदार्थको पिउदा भेटेको र पछि ति फुटबलर रोबेनले उनीलाई ग्लाइफाडाको दक्षिणी उपनगरमा उनको घरमा पुर्‍याउदा उनीमाथि यौन शोषण भएको आरोप लगाएकी छिन। ”
ग्रीक सिटी टाइम्सले लेखेको , ” सेमेडो मंगलबार एक अभियोजकको सामना गर्ने छन्. ”
उक्त बलात्कारको केसमा एक अर्का व्यक्तिको पनि नाम जोडिएको छ , तर उनि पक्राउ परेका छैनन्।
पोर्तुगाली दैनिक पत्रिकाले लेखेको छ कि , ” सेमेडो कानुनी झमेलामा परेको यो पहिलो पटक होइन। सन् २०१८ मा पनि उनि पेस्तोल देखाएर एक मानिसलाई अपहरण गरेको अभियोगमा स्पेनमा ५ महिना हिरासतमा बसेका थिए। अदालतले उनलाई ५ बर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। ”
तर उक्त केसमा स्पेनको भ्यालेन्सियाको एक अदालतले उनलाई सुनाइएको ५ बर्षको जेल सजायलाई निलम्बित गरेको थियो।
त्यस्तै कोर्रिएओ मान्ह्याले ले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ कि, ” स्पेनको अदालतले सेमेडोलाई उनको जेल सजाय निलम्बन गरेसंगै स्पेनमा जान ८ बर्षका लागि बन्देज लगाएको छ। त्यस्तै अदालतले उनलाई ४६ हजार युरो क्षतिपूर्ति जरिवाना समेत गरेको थियो।